Ọsọ ọsọ, ihe nchekwa USB, Cone Traffic Pvc - YONGSHENG
Ihe nchekwa USB
Onye nche nkuku
Ụgbọ okporo ígwè okporo ụzọ
Oke Ọrụ Curb Ramp
Ọnụ ụzọ mgbago ugwu/oche ụkwụ
Cone okporo ụzọ
Ihe mgbochi roba Dock
Dock Leveler Bompa
Ihe mgbochi Dock laminated
Nkwụsị ụkwụ ụkwụ
Ihe mgbochi ndọba ígwè
Tiantai Yongsheng Traffic Facilities Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ụlọ ọrụ okporo ụzọ nwere ụlọ nyocha nke ọma na ike teknụzụ siri ike, ọkachamara na mmepụta na ahịa nke ihe eji eme roba na Cable Protector, Nchekwa ụlọ nkwakọba, nchekwa ebe nchekwa na ramp.
Site n'ọtụtụ dịgasị iche iche, ezigbo mma, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na atụmatụ mara mma, a na-eji ngwaahịa anyị eme ihe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. A na-amata ngwaahịa anyị na ntụkwasị obi site n'aka ndị ọrụ ma nwee ike izute mkpa akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze na-agbanwe agbanwe.
Nnukwu ihe mgbakwasị ụkwụ na-acha odo odo maka ụgbọ ala
6 Ft Rubber Speed ​​Humps nwere Modular Interlocki...
Ihe nrịbama oche nkwagharị rọba Ramp-TRA Series
Ụgbọ ala okporo ụzọ Curb Ramp-TRC08
PVC okporo ụzọ Cone
Rịba oche nkwagharị mgbago ugwu
Oghere ụzọ mgbokwasị rampụ oche nkwagharị ụzọ mgbapụ
Emepụtara anyị ihe karịrị ngwaahịa 200+ dabara na MUTCD, ASTM, AS/NZS na CE Standard. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ wulite mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa anyị gburugburu ụwa. Ebumnuche anyị bụ ịbụ isi mmalite gị maka ụdị nchekwa USB niile, nchekwa ụlọ nkwakọba ihe, nchekwa ebe a na-adọba ụgbọala na rampụ.
Ọ bụ mkpọmkpọ ọsọ nke enwere ike ịhụ mgbe ọ bụla...
Ndokwa na ọrụ nke nkwụsị wheel...
Otu esi eme ihe nkwusioru “killer...